Oovimba be-DOLLAR ooVimba-Funda ukurhweba
I-Dollar iphinda iqalise ukuBuyela ngoLwesibini njengoko i-Omicron yoyika i-Stalls ethengisayo
I-dollar yase-US igcine i-bearish bias kwiseshoni yaseLondon ngoLwesibini phakathi kokukhula komdla wemarike yezinto ezinobungozi kunye neemali. I-DXY yandise ilahleko yayo ngobusuku obunye kulandela ukungqubana kwezicwangciso zenkcitho yeDemokhrasi eWashington.
Nangona kunjalo, ukusabela okungaphezulu kwe-bearish kuye kwathintelwa phakathi kwe-spike kwiimeko ze-Omicron kwihlabathi liphela, nto leyo ebangele ukuba amanye amazwe abuyisele imiqathango yothintelo, ethintela abarhwebi ekubeni babheje ngogonyamelo.
Isalathiso sedola (DXY), elandelela ukusebenza kwemali ngokubhekiselele kwiibini ezithandathu eziphezulu, zirekhoda i-intraday ephantsi kwi-96.341, phantsi kwe-0.14% namhlanje.
Ngeli xesha, i-euro (i-EUR) inyuke kancinci ngokuchasene nedola namhlanje kusasa njengoko isibini sibuyisela i-1.1300 phezulu. Nangona kunjalo, i-yen yaseJapan enobungozi yawa malunga nedola namhlanje njengoko i-EUR / USD idibene kufuphi ne-118 phezulu. Omabini la manyathelo abonise iinzuzo ezirekhodwe kwizabelo zamashishini aseAsia, ikamva lesabelo se-US, kunye ne-oyile.
Nangona kunjalo, kwisakhelo sexesha elikhulu, i-DXY ihlala inobundlongondlongo. Imali isondele kwiinyanga ezili-16 eziphakamileyo kwi-96.914 kwiveki ephelileyo emva kwesibhengezo se-Fed ukuba inokuba nenani lenzala ephindwe kathathu ngo-2022.
Ukuwa kweDola kulandela ukuBuyela kukaManchin ngaphandle “Yakha Umva Ngcono” ityala
Ukwehla kwayizolo kuza kulandela uSenator wase-US uJoe Manchin, iDemocrat ephakathi edlala indima ebalulekileyo kuMongameli u-Biden wamabhongo otyalo-mali lwasekhaya oluyi-1.75 yeebhiliyoni zeedola (uBuild Back Better), uphawule ngeCawa ukuba akazukuyixhasa iphakheji. Njengoko bekulindelekile, oku kwaphosa imakethi kwi-pandemonium ekhuthaza abarhwebi ukuba bafune ii-asethi ezichasene nomngcipheko.
Ethetha ngesiganeko sangeCawa, umhlalutyi kwiimarike ze-IG, uKyle Rodda, wathi:
“Idola yarhoxa ekuqhekekeni kweBuild Back Better. Ukuvuselela okuncinci, ukukhula okubuthathaka, kunye namaxabiso ahlayo kwisiphelo esifutshane [yaye] yanele ukutyhala idola ukuba ihle kancinci. "
tags uhlalutyo, IDOLI, Forex, iindaba, Micron
I-Dollar Brushes Ngaphandle kweDatha yeCPI, iyaqhubeka iRanga
I-multi-decade ephezulu Idatha ye-CPI yase-US ayibonakali ibangela nayiphi na intshukumo kwiDola. Ngokubanzi, i-greenback ithengisa kuluhlu oluncinci.
I-CPI yase-US yenyuka ukuya kwi-6.8%, izinga eliphezulu lonyaka ukususela kwi-1982, ngokwedatha ekhutshwe ngoLwesihlanu phambi kwentlanganiso ye-FOMC kwiveki ezayo. Ngokwabahlalutyi, uxinzelelo lusaxhaphakile, kunye neenkqubo zokubonelela ngoxinzelelo lokuzalisekisa imfuno ekhulayo yeemveliso kunye neenkonzo zokunyuka kwamaxabiso ngoku eqala ukubonisa iziphumo zobhubhane kwiindleko zezindlu. Balindele ukuhamba kwenyanga ekunyuseni kwamaxabiso ukumodareyitha kwiinyanga ezizayo, kodwa qaphela ukuba kukho i-gap ebalulekileyo phakathi kokunyuka kwamaxabiso akhoyo kunye nethagethi ye-Fed.
Inkcazo yexabiso labathengi e-United States ngoNovemba yenyuka ngo-0.8% umama, ophakamileyo kunokuba kulindelwe ngu-0.7% umama. Ngaphezulu kweenyanga ze-12, i-index yexabiso lomthengi yakhawuleza ukuya kwi-6.8% YoY, xa kuthelekiswa ne-6, 2% YoY, ngokuhambelana nokulindela. Eli lelona zinga liphezulu ukususela ngoJuni ka-1982.
I-CPI engundoqo iphakame i-0.5% ye-MoM, ngokuhambelana nokulindela. I-CPI engundoqo iphakame kwi-4.9% YoY ukusuka kwi-4.6% ye-YoY, ngokuhambelana nokulindela. I-Energy Index inyuke nge-33.3% YOY. Zombini zezona ziphezulu ubuncinane kwiminyaka eyi-13.
Emva kwedatha ye-CPI, i-US Dollar Index iphelile iVeki kwi-96.00
Njengoko iseshoni yaseWall Street yafikelela ekupheleni, uvakalelo lwemarike lwalulungile, kunye ne-equities enkulu yase-US egqitywe eluhlaza, kunye neenzuzo ezivela kwi-0.60 ekhulwini ukuya kwi-1.13 ekhulwini.
Amazinga kaNondyebo ngexesha elifutshane lokuvuthwa kwejika lehlile ngamanqaku asisiseko se-1-3, aphela kwi-0.6544 ipesenti, ipesenti ye-1.2467, kunye neepesenti ze-1.482, ngokulandelanayo, kwimarike yebhondi yase-US. Ixesha elide le-20 kunye ne-30 ye-curve yenyuka i-1-1.5 isiseko samanqaku, ngokulandelanayo, kwi-1.9138 ipesenti kunye ne-1.88 ekhulwini.
Ngaphandle koko, idola yaseMelika yayikwinceba yedatha yokunyuka kwamaxabiso e-US. ISebe lezaBasebenzi libhengeze ngoLwesihlanu ukuba i-Index yexabiso loMthengi ngoNovemba ikhule ibe yi-6.8% ngonyaka, ngokuhambelana nokulindela kunye nokufundwa kwe-Oktobha ye-6.2 ekhulwini. Ukongeza, i-Core CPI, engabandakanyi ukutya kunye namandla, inyuke ukuya kwi-4.9 yeepesenti, njengoko kulindelwe kodwa ingaphezulu kwe-4.6 yepesenti ye-Oktobha.
tags IDOLI, I-CPI yaseMelika
IDola iyenyuka ngakumbi ekuphenduleni iNtetho yeFed Taper
Idola yaseMelika iwuchithile umfanekiso odityanisiweyo womsebenzi wase-US ngolwesiHlanu njengoko abatyali mali bengayihoyi i-omicron kwaye baxabisa i-Fed taper ekhawulezayo evela I-FOMC, ekulindeleke ukuba ibhengezwe kwiveki ezayo. Kanye njengokuba i-curve yesivuno sase-US isiba caba, iimarike ziye zanyuka ngokukhawuleza, zomeleza imali yase-US.
Njengoko uloyiko lwe-omicron luphela, isalathiso sedola siye sanyuka ngenxa yokuguqulwa kweemali ze-han ezifana ne-yen yaseJapan kunye ne-Swiss franc. I-USD / JPY kunye ne-USD / CHF imilinganiselo yokutshintshiselana inyuke i-0.16 ipesenti kunye ne-0.28 ekhulwini, ngokulandelanayo. Ukuba iimpawu zokuqala ezivela eMzantsi Afrika zichanekile, iimarike ziya kuba nawona manqanaba asezantsi kuzo zombini izibini ixesha elide.
I-commonwealth kunye ne-Euro, ezona zinxulumene kakhulu neemvakalelo zomngcipheko, zifumana isiqabu esincinci. Iinkxalabo zoluvo zithathelwe indawo yi-Fed taper ekhawulezayo kunye nokunyuka kwesantya senzala e-US ngokukhawuleza, kune-omicron. I-EUR / USD kunye ne-GBP / i-USD ziye zahla namhlanje, ngokulandelanayo, kwaye zihlala zithengisa nakuphi na ukunyuka kwe-50 ukuya kwi-100 amaphuzu.
Kwizibalo zemisebenzi ye-ANZ eqinile, i-AUD / USD inyuke i-0.30 ekhulwini kodwa i-NZD / USD ihlala ibambelele. Bobabini basengozini yokuthengisa ngakumbi kule veki, kunye ne-AUD / i-USD eyenza i-head-and-shoulder pattern yezobugcisa ezimbi kakhulu ezijolise ekuhambeni kweeveki ezininzi malunga ne-0.6000.
Idola iyenyuka ngeTandem kunye nezivuno zikaNondyebo njengoko i-Euro iNcipha
Emva kweendaba ezithuthuzelayo eziphathelele ukubheja kwe-Omicron okomeleza ukuba i-Fed iya kukwazi ukuqinisa umgaqo-mali wezemali ngesantya esikhawulezayo, idola liyenyuka, lilandelelanisa izivuno zebhondi ngasentla. Iimali ze-Riskier, ezifana nedola yase-Australia, ziyakhula, ngelixa iindawo ezikhuselekileyo, ezifana ne-yen yaseJapan, ziwa.
Emva kokuhla kwemiyalelo yokuvelisa yaseJamani ngo-Oktobha, i-EUR / USD ithengisa kumgangatho ophantsi. Ukulandela ukukhula kwe-1.3 ekhulwini ngoSeptemba, ii-odolo zefektri zehle nge-6.9% ngo-Oktobha. Ukubonelela ngeebhotile, ukunyuka kwamaxabiso, kwaye, kutsha nje, ukunyuka kwamatyala e-COVID zonke zenza umonakalo kwishishini. Oku kunokuthintela ukukhula koqoqosho olukhulu lwe-Eurozone, olusengaphantsi kwamanqanaba obhubhane.
Iifemu zeedola kuRhwebo lweHolide oluThulekileyo, Njengoko iYen Ihlala ithambile
Kwiseshini yanamhlanje, iDola yaseNew Zealand iyaqhubeka ukuba yeyona mali iqhuba kakubi, kunye neYen elandela ngasemva, iimarike zemali zithule ngokwenene. Ngenxa yokuba I-United States ikwiholide, urhwebo luya kuhlala lusezantsi. I-greenback iseyeyona mali inamandla evekini, ngenxa yokulindela oko "Edlulayo" kodwa ukunyuka kwamaxabiso okuzingisileyo kuya kutyhala i-Fed ukuba inyuse inzala ngokukhawuleza kunokuba kamva. Njengoko ixabiso leoli ye-WTI lizinzile ngaphezu kwe-75 yokuphatha, i-dollar yaseCanada okwangoku isibini esinamandla ngeveki.
Kwimizuzu yentlanganiso ye-FOMC ngoNovemba 2-3, abathathi-nxaxheba abahlukeneyo baqaphela ukuba ikomiti kufuneka ilungele "Lungisa isantya sokuthengwa kwe-asethi kwaye uphakamise uluhlu olujoliswe kuyo kwireyithi yemali ye-federal ngaphambi kokuba abathathi-nxaxheba balindeleke ngoku" ukuba ukunyuka kwamaxabiso kuyaqhubeka nokunyuka ngaphezu kwamanqanaba ahambelana neenjongo zeKomiti."
Kwangelo xesha, ngenxa yokuqhubeka kokungaqiniseki okubalulekileyo malunga nophuhliso lwekhonkco lonikezelo, ukuhanjiswa kwemveliso, kunye nokusasazeka kwentsholongwane, abathathi-nxaxheba abaninzi bakugxininisile oko. "Ukwamkelwa kwesigulane kwedatha engenayo kuhlala kwamkelekile, ukuvumela ukuba kuhlolwe ngokucokisekileyo ukuguquka kwamakhonkco ophuhliso lobonelelo kunye neempembelelo zabo kwimarike yomsebenzi kunye nokunyuka kwamaxabiso".
"Ngokwenza oko, abathathi-nxaxheba baqaphele ukuba iKomidi ayiyi kunqikaza ukuthatha amanyathelo afanelekileyo okujongana noxinzelelo lokunyuka kwamaxabiso oluye lwabeka emngciphekweni ukuzinza kwexabiso lexesha elide kunye neenjongo zengqesho."
Idola yaseMelika iRallying Kanye
Emva kwethoni ye-hawkish engaphezulu kwimizuzu ye-FOMC kunye nezibalo ze-PCE eziphezulu kunezilindelekileyo, idola yaseMelika yavuka kwakhona ngobusuku. Iimarike zemali zisenokuba zibone ukuthengwa kwe-euro eyingozi ngaphambi kweholide, kunye nedola yaseMelika ngoku iyindlela ekhethwayo yentengiso yokudlala urhwebo lwexabiso lokunyuka kwamaxabiso/i-Fed-taper, ngakumbi nge-euro ephelelwa ngamandla phantsi kwelifu lentsholongwane. Njengoko i-US stock index futures iqhubeka phambili, i-dollar index inyuke nge-0.35 yeepesenti ukuya kwi-96.86 kodwa ngoku ibuyele kwi-96.75.
Idola yaseMelika ihlala isesichengeni kulungiso olusezantsi, kunye nesalathiso samandla esalathiso sedola (RSI) ikwindawo ethengwe ngokugqithisileyo iveki yonke. Nangona kunjalo, isalathiso sihlala singumgqatswa wokuthenga, kunye nethuba lokuqhawula i-97.00 kule veki.
IDola iyaqhubeka nokuNyuka Njengoko amaBango angenamsebenzi ewa, uHlumo loQoqosho luphantsi
Idola iyaqhubeka nokunyuka namhlanje, kunye ne-greenback ebambe ngokuqinileyo emva kokuba bhetele-kunokuba-ilindelwe izibalo zamabango okungasebenzi. Kwimeko yomngcipheko, i-yen yimali yesibini eyomeleleyo, eneempawu ezinkulu zaseYurophu kunye nekamva lase-US elibomvu.
The Ukukhula koqoqosho lwase-US izinga kwikota yesithathu lihlaziywe laya kutsho kwishumi le-2.1%. Iqhutywe ngaphantsi kwengxelo yokuqala (-24.4% vs. -26.2% ibikezelo), ukukhula kwenkcitho yabathengi kuye kwahlaziywa kwakhona ngeyeshumi ukuya kwi-1.7% (xa kuthelekiswa ne-1.6% ekukhululweni kwangaphambili). Oku kuthotywe ngokuyinxenye kukuncitshiswa kwenkcitho yenkonzo (+ 7.6% vs. + 7.9% adv.).
Uhlumo lulonke lotyalo-mali lweshishini lwehliswe kancinci ukuya kwi-1.5(ukusuka kwi-1.8%). Uhlaziyo oluhlayo lweemveliso zepropathi enomgangatho ophezulu wokuqonda kulungiswa luhlaziyo olunyusiweyo lwezixhobo kunye nenkcitho yolwakhiwo.
Uhlengahlengiso kutyalo-mali lweendawo zokuhlala, inkcitho karhulumente, kunye nokuthunyelwa kwempahla kwamanye amazwe kunye nokuthunyelwa kwamanye amazwe nako akunamsebenzi. Igalelo lolwakhiwo lwempahla kuhlumo lwahlaziywa ngokutsha ngepesenti enye ukuya kwisi-2.1 ekhulwini.
Inzuzo yenkampani yaxelwa kuqikelelo lwesibini, ebonisa ukuba inzuzo yayiphezulu njenge-US $ 121.4 yezigidigidi (okanye i-18.4% ngonyaka), eyayingaphantsi kwe-US $ 267.8 yezigidigidi kwikota yesibini. Isabelo seenzuzo zenkampani kwi-GDP iyaqhubeka nokunyuka kwaye ngoku i-12.7%, isabelo esiphezulu kwiminyaka engaphezu kwama-60.
Imeko yezoqoqosho kwikota yesibini yahlala ingatshintshi. Ukucotha kokukhula kubangelwa ikakhulu ukuncipha kwenkcitho yabathengi ukusuka kwi-stimulus kwisiqingatha sokuqala sonyaka, kwaye ukunqongophala kweemoto kuye kwandisa lo mkhwa. Ukukhula kwenkcitho yenkonzo kuhlala kusempilweni, kwaye kukho ubungqina bokuba amaza osulelo lweDelta alithobile izinga lokukhula kancinane.
Ukunyuka kweDola ukuya ngamandla
Emva kokuba amanani-manani ase-US acebise ngenkani uxinzelelo oluphezulu lokunyuka kwamaxabiso kunye nongenelelo olusondeleyo lwe-Federal Reserve ukulwa neziphumo zabo kuqoqosho, imfuno ye-greenback yahlala yomelele.
Ngokutsho kwe-Core Personal Consumption Expenditures Price Index ingxelo ekhutshwe ngoLwesithathu, ukunyuka kwamaxabiso e-US kufikelele kwinqanaba eliphezulu kwiminyaka eyi-30 ngo-Oktobha. I-FOMC nayo ikhuphe imizuzu kwintlanganiso yayo kaNovemba.
Ukuba ukunyuka kwamaxabiso kuyaqhubeka nokunyuka ngokukhawuleza kunokuba bekulindelwe, amagosa akholelwa ukuba kufuneka alungele ukulungelelanisa isantya sokuthengwa kwe-asethi kunye nokunyusa uluhlu olujoliswe kuyo kwireyithi yemali ye-federal ngokukhawuleza kunokuba kulindelwe, ngokutsho koxwebhu. Ngaphandle koku, ukusabela kwemarike kwacinywa kuba inkcazo yayingenazo izothuso.
IDola Iyandisa Ukulandela imeko ye-Eurozone COVID-19
Idola yaseMelika iqhubekile nokunyuka ngoLwesihlanu emva kokuba i-Austria ibhengeze ukuvalwa ngokupheleleyo kwelizwe ngenxa yenani elikhulayo lamatyala e-Covid-19. Uloyiko lokuba izithintelo ezongezelelweyo zentsholongwane kuyo yonke i-Eurozone zinokuphazamisa ukuchacha kuqhubele phambili Idola yaseMelika phezulu xa kuthelekiswa ne-euro, kodwa kwacaca ukuba ukuthenga okunxulumene ne-haven kuncede i-greenback ngokubanzi.
Iidola zase-Australia kunye ne-New Zealand zombini zilahlekelwe ngaphezulu kwe-0.60 yeepesenti ukuya kwi-0.7250 kunye ne-0.7000, ngokulandelanayo, njengoko umngcipheko wawusiba mbi. I-NZD / i-USD inokufumana inkxaso ethile phambi kwengxelo yeNtengiso yoLwesithathu kunye nesibhengezo somgaqo-nkqubo we-RBNZ. Ukuba i-RBNZ ayiphakamisi inzala kwi-0.50 yeepesenti, i-NZD / USD ingawela ngaphantsi kwe-0.6900 kule veki.
Ngaphandle kokuba iireyithi zase-US zakudala ziqala ukuhamba ngaphezulu kwijika kwakhona, ukuthengwa kwe-haven kuya kuxhasa i-yen, kuthintelwe ii-USD/JPY. Ngodushe oluchasene nokuvalwa kweYurophu kwimpelaveki, imbonakalo yemali enye imfiliba, nangaphandle kokujonga imeko yokudodobala koqoqosho ngenxa yoko. Kule veki, i-EUR / USD inokubetha i-1.1160, enokukhokelela ekuhlolweni kwakhona kwe-1.1000. I-GBP / i-USD iyaqhubeka ifumana inkxaso ngenxa yezibalo zamva nje ezingcono kunezilindelekileyo, kodwa iya kuqhubeka iphazamiseka ngobudlelwane bayo bejografi kunye ne-euro.
Ukuza kuthi ga ngoku, ibali lamandla edola yaseMelika liqinisekisiwe kakhulu kwicandelo le-G-10, kunye neemali zaseAsia zigcina uzinzo, ngenxa yoxabiso oluqhubekayo lweyuan yaseTshayina.
Ukuphendula kweDola njengoko uBiden ephinda watyumba uJerome Powell
Umongameli uBiden wagqiba kwelokuba ukunyula kwakhona uPowell kuyakuzalisekisa okukaMongameli "umsebenzi ombini" yokugcina umgaqo-nkqubo wemali ukuqhubeka ngelixa ikwakhusela ukuzimela kwezopolitiko kweFed. Ngokunyuka kwamaxabiso okuhlala kungaphezulu kwenjongo ye-Fed, iimarike ziya kukhangela phambili kwintlanganiso kaDisemba yeFed ukubona ukuba ibhanki ephakathi iya kukhawulezisa ukuchithwa kwayo.
Iindaba zokutyunjwa kwakhona kukaSihlalo we-Fed uJerome Powell kwithuba lesibini njengoSihlalo we-Fed kubangele ukusabela kwe-hawkish kwiimarike zebhondi zase-US. Oku akukho nto ingako kuba uPowell uthathwa njengokhetshe, kodwa ngenxa yokuba uLael Brainard, oyena mgqatswa ophambili ongomnye wale ndima, uthathwa njengonoburharha ngakumbi kunoPowell. Ngenxa yokuba i-Fed ekhokelwa ngu-Brainard kuqikelelwa ukuba iza kugcina amaxabiso ephantsi ixesha elide, impendulo ye-hawkish yentengiso imalunga nokukhupha amaxabiso omngcipheko.